Khuburo ka Digtay in Qofku Xogtiisa Saxda ah uu ku Keydsado Shabakadda FACEBOOK-GA – Radio Daljir
Agoosto 31, 2015 7:06 b 0
Isniin, Ogoosto 31, 2015 (Daljir) — Ujeedada ugu muhiimsan ee Faceboog-ga ayaa ah in dadku ay ku wadaagaan macluumaad ku saabsan noloshooda ,waxaana ka hor inta aadan shabakadan ku soo biirin lagu weydiinaya su’aalo dhowr ah ,taasi oo la sheegay in ay khatar ku noqon karto mustaqbalka danbe.
Hadaba halkan waxaan idin kugu soo gudbanaynaa dhowr sababood oo aadan ugu baahnayn in akoonkaaga facebuug-ga aad galiso macluumaadkaaga saxda ah ee adiga kugu saabsan sababo la xiriira dhinaca amaanka.
Ma ahan fikir wanaagsan inaad taleefonkaaga gacanta aad galiso safxadaadda facebuuga ,waxaana tani ay sahlaysaa in kooxaha internetka ka qaraabta ay macluumaadka adiga ku saabsan si sahlan ula baxaan ,isla markaana u adeegsadaan si khaldan.
Tuugada Internetka waxaa taleefankaaga gacanta ay u isticmaali karaan in ay ku raadiyaan safxadaadda Facebuug-ga ,taasi oo suurtagal ka dhigi karta in macluumaadkaaga ay dibada u baxaan.
Reza Moaiandin oo ah baare dhinaca amniga Internetka ah ayaa sheegay in lambar kasta oo laga isticmaalo wadamada Maraykanka ,Ingiriiska iyo Canada ,isla markaana lagu kaydiyo Faceboog-ga uu si fudud lagu heli karo.
Waxa uu sheegay hadii uu doono in macluumaadka uu ka helo akoonada shabakadda Facbuug-ga uu ka gadan karo suuqa madow ee Internet-ka ,waxaana uu sheegay in isticmaalayaasha shabakadan looga –baahan-yahay in lambaradooda ay qariyaan.
Sidoo kale waxaa la sheegay in hadii aad galiso facbuug- page-kaaga halka aad ku nooshahay ay keeni karto in lala socdo dhaq-dhaqaaqyadaada, sida marka aad soo dhigayso sawirro ,ka hadlayso fasaxaaga iyo marka aad waxyaabo cusub soo gadato ,waxaana khubarada internetka ay ku taliyeen in aad facbuug-gaaga aad ka saarto address-kaga gurigaaga hadii aad kal hore galisay.
Isku day inaad Facbook aadan ku qorin halka aad ka shaqayso ,hadii qof aad isku meel ka shaqaysaan uu isku dayayo in uu eego facbuugaaga ,waxaa dhacda inta badan in akoonkaaga uu ku arko sawir ama post aad horey u samaysay oo uusan jeclaysan.
Si lamid ah tani waxa ay sahlaysaa in kooxaha internet-ka ay u dhacaan kombiyuutarkaaga shaqada ,akoonadaada internetka ,waxaana kooxaha internetka jabsada ay doorbi doonaan in ay jabsadaan akoonka uu qofku ku leeyahay shabakadda Linkedin.
Ugu danbayn ,arinta ugu xiisaha leh ee mowduucan ayaa ah in laga digayo inaad akoonkaaga facebooga aad galiso kaarkaaga bangiga ,waxaana tani ay suurtagal ka dhigaysa in sahlan dad kala duwan ay xisaabtaada u maamushaan sida qof kamid ah qoyskaaga iyo waliba asxaabta kugu dhow-dhow.
Dhagayso: Madaxweynaha Jubbaland oo ka Hadlay Booqashadii Raysul-wasaare Cumar ee Kismaayo